Thenga i-Bitcoin e-China Ngokushesha Nangokuphephile | Paxful
Thenga Futhi Uthengise I-Bitcoin (BTC) e-China
Tshala imali ku-Bitcoin kalula nangokuphephile. I-Paxful iyindawo engcono kakhulu yokuthenga, ukuthengisa kanye nokuthumela i-Bitcoin ngezindlela zokukhokha ezingaphezu kwezingu-300 kuhlanganise izimali ezithunyelwa ebhange kanye ne-WeChat Pay!
Shintshela olimini lwesiShayina (简体中文(SC))
Intengo ephambili—I-ID ingadingeka
Izindlela zokukhokha ezingaphezu kwezingu-300
Zama enye indlela yokukhokha
1. Khetha indlela yokukhokha kwesobunxele
Khetha ezindleleni zokukhokha eziphambili eChina. Noma uthole noma iyiphi enye indlela yokukhokha ezindleleni eziphambili ongakhetha kuzo ngezansi.
2. Thayipha inani ozolisebenzisa
Inani nge-Yuan (Chinese) Renminbi
Ungathenga i-Bitcoin ngezindlela eziningi
Thenga nge-WeChat Pay
Landela lezi ziqondiso
1. Khetha i-WeChat Pay bese uthayipha inani le-Bitcoin olidingayo. Umdayisi uzokusiza ufake imali esikhwameni sakho se-Bitcoin ku-Paxful.
2. Landela iziqondiso zakhe ukuze uthumele izimali. Ukusebenzisa i-WeChat Pay kuyindlela esheshayo nelula yokuthenga i-Bitcoin e-China.
3. Lapho ukuthunyelwa kwemali sekwenziwe, Chofoza inkinobho ethi "Ngikhokhile" bese ulinda umdayisi ukuba akhulule i-Bitcoin yakho.
4. Ama-Bitcoin angena ngokushesha esikhwameni sakho semali se-Paxful futhi angathunyelwa noma kuphi emhlabeni ngokushesha.
Thenga i-Bitcoin Ngokudluliswa Kwemali Ebhange
1. Khetha Ukuthumela Imali Ngebhange bese uthayipha inani ongalisebenzisa ngenhla. Umdayisi uzokusiza ufake imali esikhwameni sakho se-Bitcoin ku-Paxful.
2. Landela iziqondiso zakhe ukuze uthumele imali isuka ku-akhawunti yakho yebhange iye kumdayisi. AKUKHO KUKHOKHA OKUSHESHAYO ESISEBENZISI SASEBHANGE, AKUKHO KUTHUMELA KWEMALI KU-ATM.
3. Lapho ukuthunyelwa kwemali sekwenziwe, Chofoza inkinobho ethi "Ngikhokhile" bese ulinda umdayisi ukuba akhulule i-Bitcoin.
Thenga ngokudluliswa kwemali ebhange
Thenga i-Bitcoin Ngamakhadii Esipho
Uma ukhetha ukuthenga i-Bitcoin ngekhadi lesipho elinjenge-Amazon Gift Card kuzodingeka ukuba ulithenge NGEMALI KUPHELA. Abadayisi bethu badinga isithombe serisidi ngaphambi kokuba bakunike i-Bitcoin.
1. Hamba uyothenga amakhadi esipho ngemali esitolo sasendaweni noma ikhadi lesipho eliku-inthanethi ku-Amazon.com.
2. Khetha indlela yokukhokha ngenhla bese uthayipha ukuthi unamalini ekhadini ngemva kwalokho uchofoze okuthi "Thenga i-Bitcoin manje". Iwindi elisha livuleka nokuthengiswayo okusha okukhethwe yi-Paxful (okuthengiswayo okungcono kakhulu).
3. Funda imigomo yokuthengiswayo bese uqala ukuhweba. Faka izithombe zengemuva lekhadi lakho elixebuliwe kanye nerisidi. Qikelela ukuthi wenza ikhadi lisebenze kuqala! Chofoza inkinobho ethi "Ngikhokhile" bese ulinda umdayisi ukuba akhulule i-Bitcoin.
Thenga amakhadi esipho
Siza abaseChina bathole i-Bitcoin futhi ungathola inzuzo ENKULU efinyelela ku-60% entweni ngayinye ethengiswayo. Qala ukuthengisa ngama-akhawunti akho e-WeChat Pay noma nge-akhawunti lebhange laseChina khona manje! Bheka umhlahlandlela wethu wamahhala. I-Paxful ithola abathengi abayizi-1000 be-Bitcoin abavela eChina usuku ngalunye.
Ingabe wazi abantu abaningi abafuna ukuthenga i-Bitcoin eChina? Nge-Bitcoin Kiosk yakho nangohlelo Lokubambisana nothile uthola 2% ekuhwebeni ngakunye phakade ngokwabelana nje ngelinki. Qala manje.
I-Bitcoin iyimali eyidijithali kanye nendlela yokukhokha. I-Paxful yenza kube lula ukuthenga nokuthengisa i-Bitcoin nge-WeChat Pay, ukuthumela imali ebhange kanye namakhadi ezipho. I-Bitcoin isiyimali eyidijithali ebalulekile ezimalini eziyidijithali. Ungayibheka njengegolide eliku-inthanethi. Njengegolide, intengo ye-Bitcoin ibilokhu ishintshashintsha futhi kulindeleke ukuba intengo ye-Bitcoin ikhuphuke, ikakhulukazi lapho ezomnotho zinzima.
Ngemva kokuthola i-Bitcoin ungenza noma yini oyithandayo. Ungakhetha ukuyigcina esikhwameni sakho semali se-Paxful, uyithengise i-Bitcoin ukuze uthole ama-US dollars noma olunye uhlobo lwemali. Ungathumela i-Bitcoin kunoma yisiphi esinye isikhwama semali se-Bitcoin.
Ungayisebenzisa kuphi i-Bitcoin?
Ukuze ubone uhlu olukhulu lwabathengisi abamukela i-Bitcoin yiya ku-https://spendabit.co/merchants.
Sebenzisa i-Bitcoin kokuthandayo
Ukugembula - BitCasino
Elekthronikhi - NewEgg
Shintsha i-Bitcoin ibe yimali nge-Bitcoin ATM eseduze kwakho - Ibalazwe le-ATM ye-Bitcoin
Amabhizinisi amakhulu amukela i-Bitcoin